Programme referral Isenselogika
Programme referral SEO nataon'i Isenselogic.com
Isenselogic.com dia manolotra kaomisiona malala-tanana ho an'ny referraly rehetra. Tsy mila manao varotra akory ianao- mampifandray anay fotsiny amin'ny firaka fandraharahana izay mila famolavolana tranokala na serivisy fanatsarana ny motera fikarohana ary hikarakara ny ambiny izahay.
Ny programa referral dia mandoa 15% amin'ny taona voalohany ho anao.
Raha misy fifanarahana vita, dia homenay anao mialoha. Raha tsy izany dia hamoaka ny fandoavanao ianao satria tonga isam-bolana ny fanamarinana.
Ohatra, raha manisy sonia fifanarahana 6 volana $ 3,000 isam-bolana ny referansa iray, izany dia fanamarinana 2,700 3,600 $ natolotra anao, mialoha. Ary ny karamanao dia hahatratra $ 12 raha manapa-kevitra ny mpanjifa fa hanohy ny serivisy mihoatra ny fifanarahana voalohany, ny ankamaroan'ny mpanjifanay dia manao izany. Raha tsy izany, ny mpanjifa dia afaka manasonia fifanarahana 5,000 volana amin'ny $ 9,000. Midika izany fa fanamarinana XNUMX $ misy ny anaranao eo!
Toerana hahitana referrer
Fivarotana marijuana fialam-boly sy fitsaboana
Biraon'ny mpisolovava sy ny dokotera
Ny orinasam-pianakaviana na namana.
Ny mpanjifanao, na ny mpanjifan'ny orinasao.
Mpivarotra manana SEO sy votoatiny mahantra.
Izay fandraharahana eo an-toerana izay te-ho eo amin'ny pejy voalohan'ny Google, ary IZAO REHETRA.
Fitarihana izay tsy mety amin'ny orinasao.
Izay fifandraisana mety mahazo tombony amin'ireo tarigetra kendrena ho kendrena.
Dingana 1: sonia ny fifanarahanay fandaharana momba ny referral
Ampiasao ny firaketana anay firaketana an-tsoratra na mifandraisa hifanakalo hevitra momba ny fampidirana mafana.
Dingana 2: Refero ny mpitarika
Dingana 3: mandoa vola
Rehefa misy famantarana miaraka aminay dia mahazo vola ianao. Tsotra be izany.
Manome fitaovam-piofanana izahay hanampy anao hahazo vola bebe kokoa.
Ny orinasa rehetra any amin'ny tanàna rehetra eto an-tany dia mety ho loharanom-bola ho anao sy ny fianakavianao. Azonao atao ny mampiasa ity programa ity raha miasa any an-trano ianao na toy ny fidiram-bola fanampiny raha manana asa ianao.
Alefaso ny mailaka Support@isenselogic.com miaraka amin'ny anaranao sy ny nomeraon-telefaonao hahazoana ny kopian'ny fifanarahana momba ny referansa sy ny fahavononanao handeha!
Manana ohatra betsaka momba ny mpanjifanay ankehitriny izahay fa azonao hamarinina.